Amnesty: Duqeyntii Mareykanka ee Somaliya dad shacab ah ayuu ku laayay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Amnesty: Duqeyntii Mareykanka ee Somaliya dad shacab ah ayuu ku laayay!
Amnesty: Duqeyntii Mareykanka ee Somaliya dad shacab ah ayuu ku laayay!
Muqdisho (Halqaran.com) – Hay’adda Amnesty International ee Xuquuqda Aadanaha ayaa Mareykanka ku eedeysay in duqeymaha uu inta badan ka fuliyo deegaanno ka mid ah Soomaaliya ay waxyeelo kasoo gaarto dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
War ay soo saartay Hay’adda ayaa lagu sheegay in baaritaanno ay sameeyeen lagu ogaaday in weerar dhacay 18-kii Maarso lagu dilay saddex qof oo rayid oo AFRICOM ku tilmaantay in ay ahaayeen xagjir ka tirsan al-Shabaab.
Amnesty ayaa sheegtay in ay diiwaan galiyeen in ka badan dhowr iyo toban kiis oo dad aan waxba galabsan lagu dilay weerarada cirka ee Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya.
Amnesty waxay sheegtay inay wareysi la yeelatay 11 qof oo goobjoog ka ahaa weerarkii 18-kii Maarso, oo ay ku jiraan dad la shaqeeya ragga duqeynta lagu dilay iyo qaar ka tirsan qoysaskaka ragga la dilay markii gaarigooda lagu dhuftay gantaal xilli ay ku sugnaayeen gobolka Shabeellaha Hoose iyaga oo caddeeyay in saddexda marxuum aanay wax xariir ah la lahayn al-Shabaab.
Qoraalka Amnesty ayay hay’addu ku sheegtay in dowladaha Maraykanka iyo Soomaaliya looga fadhiyo in ay baaritaan xooggan oo madax bannaan lagu sameeyo duqeyntan, sidoo kale ay xaqiijiyaan in cid kasta oo ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah ee bani’aadannimada lagula xisaabtamo, isla markaana magdhaw la siiyo qoysaska dhibbanayaasha iyo in la hirgeliyo hannaan waxtar leh oo lagu xaqiijinayo in si badqabta ay dadka u sheegi karaan khasaaraha rayidka ka soo gaara hawlagallada millateri.
Tan iyo billowgii sanadkan Mareykanka ayaa sare u qaadday weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee ay ku beegsadaan kooxaha al-Shabaab iyo al-Qaacida ee dagaalka kala horjeeda dowladda Soomaaliya.
Taliska howlgalka Mareykanka ee AFRICOM ayaa duqeymo dhanka cirka ah ku beegsada kooxaha mayalka adage ee dagaalka kala horjeeda ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta ee Afrika.
dad rayid baa lagu laayay
Duqeyntii Mareykanka ee Somaliya